राजीनामा नदिई नहुने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री देउवा नै झस्किनेगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले चाले यस्तो कदम, अब के हुन्छ ? – GALAXY
राजीनामा नदिई नहुने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री देउवा नै झस्किनेगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले चाले यस्तो कदम, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं, कात्तिक ७ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब आएपछि उनले चलाखीपूर्ण कदम चालेका छन् । आफूले जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन दबाब नदिएको बरु नबनाउन आग्रह गरेको बताउदैं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई आरोप थोपरेका हुन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका टोलीसँगको आज भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जवराले यस्तो बताएका हुन् । ‘गजेन्द्र हमालसँग मेरो ससुराली सम्बन्ध २०४१ सम्म थियो । मेरी श्रीमतीको निधन भएपछि अर्को बिहे गरेको हुँ । मैले उनलाई मन्त्री बनाइदिनु भनेर कुनै नेतालाई भनेको छैन ।
भेटेको छैन । बरु यसबारे मिडियामा समाचार आएपछि गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नबनाइदिनुस् भनेर चाँहि भनेको हुँ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै बार महासचिव लीलामणि पौडेलले भने
प्रधानन्यायाधीश जबराकै दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाँकेका पुराना कांग्रेस नेता हमाललाई उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेको चर्चा थियो । हमाललाई मन्त्री बनाएकोमा सरकारको निकै आलोचना भएपछि तीन दिन नपुग्दै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
उनले को कताको हो, कुन पार्टीको भन्ने विषय आफूसँग जोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्‌लाई पूर्णता दिनुअघि नै प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट हमाल मन्त्री बन्न लागेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए।
त्यसपछि यसको चौतर्फी आलोचना पनि भएको थियो। तर, आलोचनाकैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले २२ असोजमा गैरसांसद हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सोही दिन कार्यभार सम्हालेका हमालले तेस्रो दिनमा राजीनामा दिएका थिए।